तिथि मेरो पत्रु » कुकुर पार्क देखि केटासित कसरी
यस कल्पना गर्नुहोस्, तपाईं स्थानीय कुकुर पार्क मा आफ्नो पोस्तीन मित्र संग फ्रिसबी फालिरहेका छन् र तपाईं दूरी मा आफ्नो क्षमता प्राण जोडीलाई सूचना. तपाईं अब के गर्छन्? पहिलो परिचय देखि एक मिति लागि सम्झौता सील गर्न, हामी कुकुर पार्क देखि केटासित कसरी केही सुझाव संकलन गरेको छ.
टिप #1: तपाईंको कुकुर एक मनमोहक Trick सिकाउनुहोस्
यो सुरक्षित छ जबकि कुकुर पार्क सबैलाई कुकुर प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर भन्न, एक श्रद्धा-योग्य चाल थाह छ भनेर एक कुकुर को लागि गरिन केही छ. एक inconspicuous आदेश प्रयोग गरेर, तपाईं आकर्षण अरूलाई आफ्नो कुकुर आफ्नो व्यक्तित्व बता दिछन मात्र एक चाल सिकाउन तर सक्नुहुन्छ.
टिप #2: तपाईंको कुकुर अन्य कुकुर संग प्ले गरौं
आफ्नो कुकुर मात्र अन्य कुकुर रुचि भनेर देखाउँदै तर तिनीहरूलाई संग खेल एडवांस तपाईं यति अधिक नजिकिन बनाउँछ. प्लस तपाईं के भने यो बन्द मारा, आफ्नो कुकुर संभावित उहाँसित एउटै छानामुनि बस्ने गरिनेछ र कुनै एक अरूसित मिलेर नगर्ने एक कुकुर मा ल्याउन चाहन्छन्. चाबी पहिलो आफ्नो कुकुर मित्र प्राप्त गर्न छ.
टिप #3: एक आरामदायक कुराकानी सुरु गर्नुहोस्
यो बाहिर एक सुन्दर दिन वा आफ्नो कुकुर को दुवै एक अर्को संग खेल हो भन्ने तथ्यलाई होस्, एक आकस्मिक कुराकानी माथि प्रहार. यो कुराकानी समयमा छ, तपाईं यस व्यक्ति अझ बढी सिक्न प्राप्त हुनेछ. ढिलो शुरू र यो कहाँ जान्छ देख्न.
टिप #4: एक Doggy तिथि लागि विनिमय फोन गन्ती
तपाईं केही विभिन्न समयमा कुरा एकपटक, तिनीहरूले सामान्यतया कुकुर पार्क आएर सोध्न. त्यसपछि तपाईं एक doggy मिति समन्वय गर्न संख्या साटासाट सुझाव. यो आफ्नो कुकुर वरिपरि केन्द्रित छ रूपमा यो प्रारम्भिक मिति रूपमा डराना हुनेछैन.
टिप #5: एक तिथि निमन्त्रणा – कुनै कुकुर
उनीहरूले चासो हो भनेर थाह एक पल्ट, एक खाने को तारीख मा उनलाई बाहिर सोध्न. अझ घनिष्ठ सेटिङ बिना कुकुर मा बैठक पनि गहिरो कुराकानी गर्न नेतृत्व र आषा कि अरू कुरा गर्न नेतृत्व गर्नेछन्.
यी सुझावहरु संग, तपाईं अब तपाईं कुकुर पार्क मा कि प्यारी देख्न अर्को समय गर्न बिल्कुल के थाहा.
बनाम पालतू. साथी उपहार – कसले तपाईं Favour हुनेछ?